Dhaawacyo la geeyay Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Dhaawacyo la geeyay Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada)
Dhaawacyo fara badan ayaa la geeyay Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho, dadkaasi oo ah kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay Hotelka Dayax ee Magaalada Muqdisho.
Dadka dhaawaca ah ee Isbitaalada la geeyay ayaa waxaa ka mid ah Suxufiyiin Sawir qaadayaal ah, kuwaasi oo iyaga oo ku sugan goobta ku dhaawacmay qaraxii labaad ee gaariga ahaa ee ka dhacay Banaanka Hotelka.
Faarax Cabdi Warsame, oo loo yaqaan (Faarax AP) ayaa ka mid ah Suxufiyiinta ku dhaawacmay weerarkaasi ee Isbitaal Madiina la geeyay.
Sidoo kale waxaa la sheegayaa dadka dhaawacyada ah ee Isbitaalka la geeyay tiradooda inay kor u dhaafayaan 25 ruux oo shacab ah u badan, kuwaasi oo wadada maraayay xilliga qaraxa uu dhacaayay.
Isbibtaalka Madiina ayaa waxaa buux dhaafiyay dad fara badan oo raadinaya eheladooda inay ku waxyeeloobeen qaraxa iyo in kale.
Sidoo kale isbitaalka Daaru Shifa ee Muqdisho ayaa la geeyay dad kala duwan oo qaba dhaawacyo, kuwaasi oo ku waxyeeloobay qaraxa dhacay.
Masuuliyiin katirsan Dowlada oo Shir jaraaid ku qabtaya Hotel Dayax
Labada Aqal oo magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha